I-OWC iqinisekisa ukuba yonke iMac entsha engama-27 inokufaka ukuya kuthi ga kwi-64GB ye-RAM | Ndisuka eMac
I-OWC iqinisekisa ukuba yonke i-27 entsha iMac inokufaka ukuya kuthi ga kwi-64 GB ye-RAM
Kwintetho yokugqibela ka-Apple inkampani ibonise iimodeli ezintsha ze-iMac, iMacBook Pro, iMacBook kunye neMacBook Air. Malunga neMacBook Pro besele sithethile kule veki kwaye siyibonile loo nto I-Apple ayongezi ukhetho yokuphindaphinda eli nani le-RAM kwiikhompyuter zabo ukuya kuthi ga kwi-32 GB. Ngayiphi na imeko, into esinayo ngoku etafileni sisiqinisekiso esivela kwi-OWC Zonke iimodeli ze-iMac ezingama-27-intshi zinokuya kwi-64GB ye-RAM Kwaye asithethi ngesilo se-iMac Pro abasibonisileyo, sithetha ngeemodeli eziqhelekileyo.
Ukuba uza kuthenga iMac ye-intshi ezingama-27 ezona zisisiseko kwi-RAM
Masicacise ukuba kwimeko yeemodeli ezingama-intshi ezingama-27 kukho ukhetho olukhoyo kwivenkile yeApple yokunyusa iimodeli ezahlukeneyo ukuya kuthi ga kwi-64 GB ye-RAM Ngaphandle kwale yongeza iprosesa ye-Intel Core i5 ye-3,4 GHz. Kule meko, ngokwe-Apple, le iMac ixhasa ubuninzi be-16 okanye i-32 GB ye-RAM kunye nezinye iimodeli eziqala nge-Intel Core i5 processor ye-quad-core kwi-3,5 GHz, sele ihambelana ne-64 GB ye-RAM.
Kolu luhlu lwenziwe ngu IMacSales siyifumene yonke iMac ye-intshi ezingama-5 enomboniso weRetina 27K, Abaprosesa be-i5 kunye ne-i7 baqinisekisiwe kwaye bavavanywa ukuthwala ubuninzi ukuya kuthi ga kwi-64GB. Ke xa usenza ukuthengwa kwenye yezi khompyuter ziyi-intshi ezingama-27 elona cebiso lililo kukuthenga imodeli ye-8 GB ezimbini zeemodyuli ze-4 GB DDR4 2.400 MHz ukusukela oko kufikeleleka kwiindawo ezine ze-SO-DIMM Bayasivumela ukuba sandise ukuya kuthi ga kwi-64 GB nanini na sifuna kwaye ngendlela yexabiso eliphantsi kunokukhetha ubumbeko olunamandla kwiVenkile yeApple. Ngokucacileyo akukho datha imodeli ye-21,5-intshi kuba ayinakho ukufikelela kwi-RAM ngasemva "kwekhava" eneemodeli ezingama-intshi ezingama-27.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » iMac » I-OWC iqinisekisa ukuba yonke i-27 entsha iMac inokufaka ukuya kuthi ga kwi-64 GB ye-RAM
Khipha iinkqubo okanye usetyenziso kwiMac yakho